शिवरात्री – सस्ता साधु र गाँजा ब्यापारको पर्ब ! – नेपाल डायरी डट कम
फ्रेवुअरी 20, 2012 फ्रेवुअरी 20, 2012 by nepaldiary
शिवरात्री – सस्ता साधु र गाँजा ब्यापारको पर्ब !
शिवरात्रीको अगिल्लो दिन हिजो दिउसो र साँझ मा पशुपतिनाथ मन्दिर आसपास खिचेका केही फोटोहरु ।
हिन्दूहरुको एउटा अर्को चाड महाशिवरात्री आज भब्यरुपमा मनाइदैछ । भगवान भोलेनाथको पूजा अर्चर्ना गरेर मनाउने यो चाडको रौनैक संसारकै हिन्दुहरुको सबैभन्दा ठुलो तर्थस्थल पशुपतिनाथमा आज ठुलो संख्यामा दर्शनार्थीहरुको भिड छ ।
तर बिगत बर्षहरुमा भगवान को आराधाना गरेर मनाइने यो चाड आज भोली भने नराम्रो सँग गाँजा खाने , अस्लील बोल्ने र रमिता गर्न चाड को रुपमा बिकसित हुँदै गइरहेको छ । हिजो दिउसो पशुपतीनाथ घुम्न जादा देखेका केही द्रिस्य तल राख्ने जमर्को गरेको छु ।
द्रिश्य न एक :-
शिवरात्रीको प्रमुख आकर्सण मध्ये एक साधु हुन । तर शिवरात्रिमा जती साधु आएका छन , हेर्दै फोहोरी , ननुहाएकोले गन्हाउने , असभ्य बोल्ने , नेपाली कसैले नबोल्ने , सबैले साधुले हिन्दी बोल्ने , भक्तजनलाई मनपरी बोलेर गाली गर्ने छन । के साधु भनेका यस्तै हुन ? साधु को साब्दिक अर्थ त सब्य , सुसक्रित र असल भन्ने लाग्छ होइन र नेपाली भाषामा ? तर पशुपतिमा आएका साधु त एउटा पनि अली सभ्य , सफा र “साधु ” जस्ता देखिदैनन । साधुको भेषमा “**** ” जस्ता देखिन्छन ।
द्रिश्य न दुई :-
साधुले गाजा को बेपार गर्ने हो ? चिलिम बेच्ने हो ? शिवरात्रिमा आएका करिब सबै साधु हरु मन्दिर आसपास मा बसेर गाँजा बेचिरहेका छन । र प्रशासन तमासा हेरेर बसेको छ् । के नेपालको कानुन अनुसार गाँजा बेच्न छुट हो ? नत्र के को तमासा हो यो ? साधु सब्द कै अपमान हुन गरी तमासा हुँदा प्रशासन किन मौन ?
द्रिश्य न तीन :- नाङगो नाँच
पशुपतीनाथ मा हरेक शिवरात्रीमा देखिन अर्को नाटक नाङगा बाबा नामधारी कथित असभ्य र जङली मान्छेहरुको हो । तलको तस्बिर हेर्नुस् । यो बाबा नामको कलंक बिच बाटोमा बसेर ……….? बिच बाटोमा के तमासा हो ? मैले यो तस्बिर खिच्दै गर्दा यो बाटो हिड्ने महिला हरु अनुहार निहुराएर हिंड्न बाध्य थिए ।
केहीबेरमा पशुपतिको स्थानिय सुरक्षाकर्मी ले हटाउन खोज्दा अपसब्द बोल्ल्दै नाङ्गो नामको बाबा !
द्रिश्य न चार :-रुद्राक्ष को ब्यापारको नाममा ठगी
अब जती मुखे चाहिने छ् भन्ने अनी पछी बोक्रा खोलेर हेर्दा भित्र रुद्रक्ष नै नबए पनि पैसा तिर्न पर्ने रे । तपाईं को भाग्य नै तेस्ताइ रहेछ भन्दियो क्या आनन्द । भाग्यको नाममा नेपाली लाई ठग्न सजिलो छ भने पछी पश्चीमा बङाल बाट ब्यापार गर्न आइपुगेछन यिनिहरु । ल यिन्को ब्यापार को ब्यानर हेर्नुस् , बाङला भाषामा छ ।
द्रिश्य न पाँच :- गुण्डा जस्ता देखिने साधु :-
यिन्ले चै अरु साधु सँग दश दस रुपयाँ लिन्छ्न रे
फोटो आँफै बोल्छ , मैले के भन्न्नु ?
द्रिश्य न छ :-
यो नि तस्बिरले नै बताउछ । धुवामा मस्त बाबाहरु !
र तल धुवामा मस्त मेरो देशको बुढो पुस्ता र अझ तल युवा पुस्ता ।
अरु कती लेख्नु ? सिभरात्री पर्ब होइन , कुपर्ब बन्दै गएको छ ।
अघिल्लो त्यो शिवरात्री !
अर्को शिवरात्रीका बाँकी फोटोहरु
One thought on “शिवरात्री – सस्ता साधु र गाँजा ब्यापारको पर्ब !”
gopal pandey भन्नुहुन्छ:
फ्रेवुअरी 20, 2012 मा 10:42 बेलुका
नेपाल सरकार ले नेपालको तर। इ म पाकेको गांजा प्रहरी लगएर फाडो र तेसै आगो लगायो ऐले हामीले भारत का नक्काली बाबा सँग नक्काली गांजा किनेर पैसा भारत गैरहेको पत्तो कसैलाई छैन …